Ungazidibanisa njani iingoma ezimbini ze-mp3 kunye nokuphicotha kwi-macOS | Ndisuka mac
Namhlanje siza kunikezela elinye lamanqaku ethu ukukufundisa indlela yokudibanisa iingoma kwisicelo somntu wesithathu esibizwa ngokuba yi-Audacity. Njengoko sele uyazi, iApple inezicelo ezinje ngeGarageBand onokuthi wenze kuyo umsebenzi wobungcali, Kodwa ukuba ufuna ukudibanisa iingoma ezimbini okanye ezintathu ukusuka esiphelweni kwenye ukuya ekuqaleni kwenye, sicebisa isicelo soPhicotho-zincwadi.
Ukuphicothwa kwesicelo asimahla onaso iyafumaneka kule dilesi kwaye inenguqulo yeqonga leekhompyuter ze-Apple, iMacOS.
Esinye isicelo esine-Apple esemgangathweni kwi-macOS yokulawula izandi yi-QuickTime uqobo, ewe, isicelo esincinci esingakhange sisetyenziselwe ezi njongo kwaye ziyafumaneka kwi-Mac yethu.Nangona kunjalo, nge-QuickTime into onokuyenza kukujoyina nje iingoma enye emva kwenye kwaye ungazidibanisi nayo yonke le nto usebenzise ividiyo njengesiseko, Oko kukuthi, uqala uvule ividiyo kwaye emva koko uvule iithowuni zomsindo ozifunayo ngaphezulu kwefestile yayo.
Kodwa siza kwenza ukudityaniswa kweengoma kunye noVavanyo. Ukwenza oku, nje ukuba isicelo sikhutshelwe kwaye sifakelwe kuya kufuneka vula enye yeengoma ngeAudacity. Uya kubona indlela evula ngayo iwindow kunye nefom yeengoma.
Inyathelo lesibini iya kuba kukwakha umkhondo wesibini westereo kwiwindow enye, ekuya kufuneka ukhethe ifayile yesibini kuphela kwaye uyitsale uye kwiwindows apho ikhoyo ingoma yokuqala.
Ukudibanisa iingoma ezimbini ekupheleni kwenye kunye nokuqala kwenye kufuneka ukhethe isixhobo sokutshintsha ixesha kwaye uhambise umkhondo apha ngezantsi kude kube sekupheleni kweyokuqala njengoko ubona emfanekisweni.
Ngoku xa enye yeengoma iphela, elandelayo iqala kodwa ngendlela engalunganga kakhulu ke kuya kufuneka siphelise ngokuthe ngcembe ukuphela kweyokuqala kunye nokuqala kweyesibini. Ukwenza oku sikhetha ifomathi encinci ukusuka esiphelweni sengoma yokuqala kwaye siye kwimenyu Iziphumo> Ukuphela ngokuthe chu. Senza njalo ngokuqala kwengoma yesibini ngokukhetha kuqala uhlobo oluthile lomtshangatshangiso emva koko sisebenzise umphumo ofanayo> Fade ngokuthe ngcembe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iinkqubo zeMac » Ungazidibanisa njani iingoma ezimbini kwi-mp3 kunye nokuphicotha kwi-macOS